2021 ဖြင့် ဇာတ်ကား50 ကား
What Happened to Mr.Cha 2021
K dramaဖန်တွေအတွက် mydrama listမှာလဲ popularityဖြစ်‌ေနပြီး 2021ဇန်နဝါရီလမှာထွက်ခဲ့တဲ့ အသစ်စက်စက်Comedyကားလေးကို
စန်းဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းက လူသုံးများတော့ ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မှာပါ….တချို့သရုပ်ဆောင်တွေ ရုပ်လဲသိပ်မချော သရုပ်ဆောင်ပိုင်းလဲ
မကောင်းပဲ မျက်နှာမြင်ချစ်ခင်ပါစေဆိုတဲ့ စန်းနဲ့
ဒီဇာတ်လမ်းကလဲ အဲ့စန်းပေါ်ပဲ ဟာသဆန်ဆန်အခြေခံရိုက်ကူးထားပြီး Fluဇာတ်ကားထဲမှာ
မင်းသား Cha-In Pyoရဲ့သဘာ၀ကျကျ သရုပ်ဆောင်ဟန်ပန်တွေနဲ့ ဇာတ်လမ်းကိုအကောင်းဆုံးပုံဖော်ထားပါတယ်.
ပျော်ရွှင်နေတဲ့အချိန်မှာ မထင်မှတ်တဲ့ မတော်တဆမှုကြောင့်
ရေချိုးနေတုန်း အ၀တ်ဗလာနဲ့ အဆောက်အအုံပြိုကျတဲ့ထဲပါသွားပြီး ဘယ်လိုတွေ လွဲချော်ကုန်တယ်ဆိုတာ ဟာသဆန်ဆန် ခွီရအောင် ရိုက်ကူးပြသထားတဲ့အပြင် ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ရဲ့ တကယ်လက်တွေ့ ဘ၀ပုံစံကိုပါ
ဖော်ပြထားတာကြောင့် အချိန်ကုန်ရကျိုးနပ်စေမယ့် ရုပ်ရှင်ကားတကားမလို့ ကြည့်ဖြစ်အောင်ကြည့်ဖို့ ညွှန်းပါရစေ
ကဲလိုင်းပေါ်မှာအမြဲတမ်း ဟာသ video လေးတွေရိုက်ပြီးခေတ်စားတဲ့
အခု မော်ကုထိုက ဇာတ်လမ်းပိုင်းလေးတွေရိုက်ရတာ
ဟာသလေးရောထားတဲ့ ဒရာမာကားလေးမို့ ငိုရင်းနဲ့ရယ်
ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ မြေးလေးရဲ့ အနာဂတ်အတွက်
တစ်ခုတည်းသော ချန်ပီယံဆုကို ဆွတ်ခူးနိုင်မယ့် ပင်ပေါင်ပြိုင်ပွဲကို
လက်လွှတ်ခဲ့တဲ့ ယန်ကောချန်ဆိုသူက ဒီအဖြသ်ပျက်ကို
အနှစ် ၃၀ တိုင် မမေ့နိုင်ဘဲ ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။
ဒါကြောင့်လည်း သူ့မြေးဖြစ်သူ ယန်ရွှမ်ရှီက နည်းပေါင်းစုနဲ့
ကုစားရာကနေ နောက်ဆုံးတော့ ပင်ပေါင်ပြိုင်ပွဲကို မြေးအဖိုး
တက်ညီလက်ညီ အတူလက်တွဲယှဉ်ပြိုင်ကြိုးစားရင်း ချန်ပီယံဆုကို
လက်ဝယ်ရမလား ကပ်လွဲမလားဆိုတာ ဒေါင်းကြည်လိုက်တော့နော်
Penthouse Special Hidden Room (2021)
မနေ့ကပဲ ပူပူနွေးနွေးထွက်ရှိထားတဲ့ အက်ရှင် Thriller ဇာတ်ကားပါ။
ဇာတ်လမ်းအရတော့ ဆာရာက လန်ဒန်သူ နှုတ်ဆက်ခွဲခွာရခြင်းတွေကိုမုန်းလို့ တစ်ခုခုဆိုရင်
နှုတ်မဆက်ပဲ ရုတ်ချည်းထွက်ထွက်သွားတတ်တဲ့သူပေါ့။ ဂျက်ဆင်ကတော့ လူဖြူဖြစ်ပေမယ့်
လန်ဒန်လိုမြို့ကြီးပြကြီးတွေရဲ့ မွန်းကြပ်မှုတွေကိုမခံနိုင်လို့ မော်ရီတေးနီးယားဆိုတဲ့ အာဖရိက
ကျွန်းလေးမှာ Diving School ဖွင့်ပြီး အခြေချနေတဲ့သူပေါ့။ သူတို့နှစ်ဦးချစ်သူတွေဖြစ်ခဲ့ကြပေမယ့်
မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ရဲ့မင်္ဂလာပွဲအတွက် ဆာရာက အဲဒီကျွန်းလေးကိုပြန်ရောက်လာပြီး ဂျက်ဆင်နဲ့
အတူ လေယာဉ်တစ်စီးတည်းစီးဖို့ရာအကြောင်းဖန်လာပါတယ်။ ဖြစ်ချင်တော့ သူတို့ရဲ့ ပိုင်းလော့ဖြစ်သူက
လေယာဥ◌်ပျံသန်းနေရင်း နှလုံးဖောက်ပြီးဆုံးပါးသွားတဲ့အခါမှာတော့ မောင်းသူမဲ့သွားတဲ့လေယာဥ◌်ဟာ
ကျွန်းပေါ်ကိုထိုးကျခဲ့တာကနေစပြီး အဲဒီပေါ်မှာ အသက်ရှင်ကျန်ဖို့ ဘယ်လိုကြိုးစားရမလဲဆိုတာ ရင်တထိတ်
ထိတ်နဲ့ကြည့်ရမှာပါ။ ဒီလို Survival Movie တွေရဲ့ကျောရိုးက မထူးဆန်းပေမယ့် လူနှစ်ယောက်တည်းနဲ့
တစ်ကားလုံးကို ဆွဲဆောင်မှုရှိရှိနဲ့ ကြည့်ရှုသူကို ပြသသွားနိုင်တာဟာ အတော်ကိုသေသပ်တယ်လို့ပြောလို့ရပါမယ်။
ဒီနေ့တော့ DC ရဲ့ ငဘတ်ဖန်တွေအတွက် ၂၀၂၁ထွက်အသစ်စက်စက် ကားလေးလာပါပြီ။ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးက နန္ဒာပါဘတ်လို့ခေါ်တဲ့ဂျပန်ကလျှို့ဝှက်ဘုန်းကြီးကျောင်းက ဆရာတော်အိုဆီမှာ
ကိုယ်ခံပညာသင်ဖို့ ငဘတ်ကလာခဲ့တာပေါ့။ ဆရာတော်အိုဆီမှာက ငဘတ်အပါဆိုရင်တပည့်က ခြောက်
ယောက်တောင်ရှိပြီး ငဘတ်ကအငယ်ဆုံးလေးပေါ့။ မိသားစုဆိုရင်လျှို့ဝှက်ချက်မထားရဘူးလို့ပြောတဲ့ဆရာက
ကျောင်းထဲမှာရှိတဲ့ဂိတ်တံခါးအကြောင်း တစ်ခါမှမပြောပြဘူးရယ်။ ဒီတော့ စပ်စုစိန်တပည့်မတစ်ယောက်က
အငြိမ်မနေနိုင်ပဲဂိတ်တံခါးကို သွားဖွင့်ကြည့်လိုက်မိတဲ့အတွက်ကြောင့် ဆရာလည်းသေသွားတာပေါ့။ ဆရာ
သေပြီးနောက် နှစ်တွေအများကြီးကြာပြီးတဲ့နောက်မှာ ဂျက်ဖာရီဘားရ်ဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်က အဲ့ဂိတ်တံခါးကို
နောက်ထပ်တစ်ကြိမ် ထပ်ဖွင့်ဖို့ ကြိုးစားလာတဲ့အခါမှာတော့……….ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကိုတော့ထုံးစံအတိုင်းလေး
ကိုယ့်ဘာသာပဲကြည့်လိုက်တော့နော် . . .
Soul of the Dragon ဆိုတဲ့ အတိုင်း . နဂါးပုံရိပ်တွေပါပါမယ် . မြန်မာတွေရဲ့ နဂါးလို့ပြောလို့ရမယ့် နဂါး
အိုဝင်နဲ့ သူ့ရဲ့စိတ်ရောဂါဖြစ်နေတဲ့ညီအော့စ်ဝဲတို့ဟာမြို့ပြင်မှာ နေထိုင်ကြတာဖြစ်ပြီးတော့
ကားပျက်လို့ရောက်လာတဲ့ ခရီးသည်တွေကိုရက်ရက်စက်စက် အပျော်သတ်ဖြတ်ကြတဲ့
တစ်ရက်မှာတော့ တေလာ မိုက် ခရစ် ဂျန်နာတို့သူငယ်ချင်းတစ်စုဟာသူတို့ညီအစ်ကို
ဂျန်နာရဲ့ ၂၅ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ခရီးထွက်လာကြရင်းလမ်းတစ်ဝက်အရောက်မှာကားပျက်သွားပါတယ်
သူတို့လေးယောက်စိတ္တဇလူသတ်သမားတွေလက်ကနေ လွတ်အောင်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ကြမလဲ အဆုံးမှာ
လွတ်ကောလွတ်မြောက်နိုင်ပါ့မလားဆိုတာကို တစ်ကားလုံးအသည်းတအေးအေးနဲ့ကြည့်ရှုရမယ့် ကားဖြစ်ပါတယ်
Jae guနဲ့ Soon youngတို့လင်မယားက ရွာသေးလေးတစ်ရွာရဲ့ လမ်းဘေးပေါ်မှာ ကားပြင်ဆိုင်ဖွင့်ထားသူဖြစ်တယ်။
သူတို့နားက အပန်းဖြေဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကြောင့် သူတို့နားကို ကားတွေမလာတာကြောင့်
Jae Guက သူ့ကိုအထင်သေးတဲ့ ယောက္ခမတွေကြောင့် စိတ်ညစ်နေရသူဖြစ်ပြီးတော့
ယောက္ခမတွေပိုင်တဲ့ ဒီကားပြင်ဆိုင်မြေကို အပိုင်လိုချင်နေသူဖြစ်တယ်။တစ်နေ့မှာတော့ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း ထရပ်ကားပေါ်က
ကျခဲ့တဲ့သံတွေကြောင့် ကားတာယာကွဲသွားတဲ့ ကားတစ်ကားသူတို့ဆိုင်ကို ပြင်ဖို့ကောက်လာချိန်မှာတော့
Jae Guက အကြံတစ်ခုရခဲ့တယ်။လမ်းမပေါ်မှာ သံတွေရိုက်ထားပြီး ကားတာယာတွေခွဲဖို့ဘဲဖြစ်တယ်။
ဒီလိုနဲ့ လမ်းပေါ်က သံတွေကြောင့် ကားတာယာကွဲတွေများလာတော့ သူတို့စီးပွားရေးလဲ ကောင်းလာခဲ့တယ်။
တစ်နေ့မှာတော့ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းက ဒါရိုက်တာရဲ့သမီးလေးကို ပြန်ပေးဆွဲခံလိုက်ရတော့
ရဲတွေက ငွေတွေအရမ်းသုံးနေတဲ့ Jae Guတို့လင်မယားကို သံသယဝင်လာကာ စစ်မေးခဲ့ပါတယ်။
Jae Guတစ်ယောက် သူတိူ့လုပ်တာလား မလုပ်ပဲစွပ်စွဲခံရတာလားဆိုတာ ကြည့်ရှုကြပါအုံး။
Thrkurမိသားစုက မွန်ဘိုင်းမှာ တရားမဝင်အလုပ်တွေလုပ်ပြီး မွန်ဘိုင်းကစီးပွားရေးတွေကို အုပ်ချုပ်နေတဲ့မိသားစုဖြစ်ပါတယ်။သားအလတ် Deviကတော့ သူ့အကိုလို အဖေ့စီးပွားရေးကိုစိတ်မဝင်စားဘဲ
စင်ကာပူမှာဘဲ ကျောင်းတက်ကာ စားဖိုမှုးတစ်ယောက်အဖြစ်လုပ်ကိုင်ဖို့ စီစဉ်ထားသူပါ။
Deviကသူ့အဖေရဲ့ လက်ထောက်ဖြစ်သူ Anwarရဲ့ သမီးPariနဲ့ချစ်ကြိုက်နေပြီး သူစင်ကာပူပြန်မသွားခင်
Deviရဲအဖေက လုပ်ကြံခံလိုက်ရတယ်။မူးယစ်ဆေးကုန်သွယ်ချင်တဲ့ Fatkiraနဲ့ Dekostaတို့က Deviအဖေကို
ပူးပေါင်းဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့ Deviအဖေက ငြင်းလွှတ်လိုက်တာကြောင့် Devisအဖေကို လုပ်ကြံကာ
မွန်ဘိုင်းက Thrkurမိသားစုကို အမြစ်ဖြတ်ဖို့ကြံရွယ်ခဲ့တယ်။အဖေနဲ့အကိုအလုပ်ကို စိတ်မဝင်စားပေမဲ့ Deviတစ်ယောက်ဟာ
မင်္ဂလာပွဲပျက်သွားတဲ့ သူနဲ့Pariရဲအချစ်ရေးကော ဖြောင့်ဖြူးပါ့မလားဆိုတာ ကြည့်ရှုကြပါအုံး။
မင်းသားချောVidyut Jammwal ရဲ့ Action scence တွေကိုလဲတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်
နိုင်ငံအတွင်းမီးရရှိဖို့အတွက်လက်ရှိသမ္မတ ဟာလုံပူ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံကိုတည်ဆောက်ပါတယ်
သို့ပေမယ့်အစွန်းရောက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုက ဖွင့်လှစ်မယ့်ရက်မရောက်ခင်မှာ ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်ပါတော့တယ်
သတ်မှတ်ရက်အတိုင်းဓာတ်အားပေးစခန်းဖွင့်လှစ်နိုင်ဖို့နဲ့ နောက်ကွယ်က ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်သူတွေကိုရှာဖွေဖို့အတွက်
ဒီဇာတ်ကားထဲမှာတော့ဘွန်မိနေသန်ဆိုတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ဟာ ငယ်ငယ်ကတည်းက သိပ္ပံပညာကိုစိတ်ဝင်စားပြီး
စူးစမ်းလေ့လာလိုစိတ်ရှိတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ပါ ကြီးလာတဲ့အခါမှာလည်း နာဆာမှာအရမ်းကိုထူးချွန်တဲ့ သိပ္ပံပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်လာပါတယ်
နာဆာမှာသူ့ရဲ့တာဝန်က မားစ်ဂြိုလ်မှာလူတွေနေနိုင်အောင် စူးစမ်းလေ့လာရတဲ့သူပါ
ဒီလိုအရမ်းထူးချွန်တဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်မှာ သူအားကျရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် တစ်ယောက်ရှိပါတယ်
အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာ အိုင်းစတိုင်းလို အရမ်းထူးချွန်တဲ့လူလည်းမဟုတ်ပါဘူး
သူကဗယ်လူဆာမီဆိုတဲ့လယ်လုပ်တဲ့လူတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ် အဲဒါကြောင့်သူဟာလယ်သမားတွေ
လယ်လုပ်ငန်းတွေကို အရမ်းလေးစားပြီး ချစ်မြတ်နိုးသူဖြစ်ပါတယ်
တစ်ရက်မှာတော့ သူဟာခွင့်တစ်ပတ်ရပြီး သူ့အမေနဲ့အတူ သူ့ရဲ့မွေးရပ်မြေကို
လယ်လုပ်ငန်းတွေဟာ မဖြစ်ထွန်းဘဲရေတွေခမ်းခြောက် လယ်တွေခြောက်ကပ် သီးနှံတွေမဖြစ်ထွန်းဘဲဖြစ်နေတာကို
တွေ့လိုက်ရပါတော့တယ် အဲ့ဒါနဲ့ဘွန်မိနေသန်ဆိုတဲ့ သိပ္ပံပညာရှင်တစ်ယောက် သူမြတ်နိုးတဲ့ လယ်သမားတွေ လယ်လုပ်ငန်းတွေကို
အဆင်ပြေအောင် ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်မလဲဆိုတာကို ဒီဇာတ်ကားထဲမှာ ရသမျိုးစုံနဲ့ ကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်
ဒီတရုတ်ရဲကားလေးရဲ့ဇာတ်လမ်ူအကျဉ်းကတော့ တင်းဝေဟာ တာဝန်ကျေပွန်တဲ့ရဲဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ပါ။
ဒါပေမဲ့ ကံတရားကမျက်နှာသာမပေးတဲ့အခါ သူ့မိန်းမပြန်ပေးဆွဲခံလိုက်ရပြီး အသတ်ခံလိုက်ရပါတယ်။
ဘာသဲလွန်စမှမကျန်တဲ့အတွက် ပြန်ပေးဆွဲလူသတ်သွားတဲ့ တရားခံကိုလည်း မဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။
အဲ့လိုနဲ့ တစ်နှစ်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ လူသတ်မှုတစ်ခုရဲ့ တရားခံက သူ့မိန်းမကိုပြန်ပေးဆွဲသွားတဲ့သူနဲ့ တစ်ယောက်တည်းဖြစ်နိုင်ချေရှိလာတဲ့အခါမှာတော့
တင်းဝေတစ်ယောက် အဲ့တရားခံကိုကြိုးစားပြီး စုံးစမ်းပါတော့တယ်။
အပုန်းကောင်းတဲ့တရားခံကို တင်းဝေတို့ရဲတပ်ဖွဲ့က ဖမ်းဆီးနိုင်ပါ့မလား။ အဲ့တရားခံကရော တင်းဝေမိန်းမကို
ဘာလို့ပြန်ပေးဆွဲပြီးသတ်ပစ်ခဲ့တာလဲဆိုတာတွေကို ဇာတ်လမ်းလေးထဲမှာ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းအောင်
ကျွန်တော်တို့ လူတစ်ယောက်ကို အကဲခတ်မယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုပုံစံအကဲခတ်ကြသလဲ
သူ့လုပ်ရပ်ကိုကြည့်ပြီးတော့လား မဟုတ်ပါဘူး တကယ်တော့ လူရယ်လို့ဖြစ်လာခဲ့ရင်
လူကောင်းရှိသလို ဆိုးတဲ့သူလည်း ရှိတတ်ကြစမြဲပါပဲ
ဒါပေမဲ့ တချို့လူတွေရဲ့အပြင်ပန်းပုံစံနဲ့ လုပ်ရပ်က ခပ်ကန်းကန်း လူမိုက်ပုံစံဖြစ်နေပေမယ့်
တကယ့်အတွင်းစိတ်သဏ္ဍာန်ကျတော့ စိတ်နှလုံးကောင်းပြီး သဘောထားပြည့်ဝကြပါတယ်
ဒီလိုလူမျိုးတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ် သူ့နာမည်က ပူလစ်ကုသီပန်ဒီ
သူဟာ သူခိုးကအစ ရဲအဆုံး မတရားတာတွေ့ရင် လက်ပိုက်ကြည့်မနေဘဲ
တကယ်ဆော်တဲ့ကောင် အများအမြင်မှာတော့ လူကြမ်းကြီးပေါ့ဗျာ
ဒီလိုလူမျိုးဆီကို အနှောင့်အယှက်အတားအဆီးတွေ ဝင်လာတဲ့အခါမှာတော့
ကံတရားရဲ့ဇာတ်သိမ်းက ဘယ်လိုတွေ ကြမ္မာငင်လာမလဲဆိုတာကို
အထက်တန်းကျောင်းကကိစ္စအားလုံးဟာ အရေးမပါဘူးလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဇိုဝီအတွက်
ရေးခဲ့တဲ့ စာအုပ်တွေအတော်များများဟာ အရောင်းရဆုံးစာရင်းဝင်ခဲ့သလို
နွေးထွေးမှုတွေလည်း လစ်ဟင်းခဲ့ပုံပါပဲ…သမီးဖြစ်သူကလည်း အရွယ်မတိုင်ခင်ရင့်ကျက်ခဲ့ရပြီး
အမုန်းကြီးမုန်းနေဆဲပါပဲ….. အသက်အရွယ်ရလာတဲ့စာရေးဆရာမကြီးဟာ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကိုယ်တိုင်ရေးအတ္ထုပတ္တိလေး
သူမရဲ့လက်ကျန်းမာရေးအခြေအနေက ကိုယ်တိုင်ရေးဖို့ခက်ခဲတာကြောင့် တခြားစာရေးဆရာတစ်ယောက်ကိုကူညီတောင်းပြီး
ဒီကားက မင်းသမီးကြီး Kajol အဓိက ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်….ဇာတ်လမ်းတော်တော်ကောင်းတဲ့ ကားမို့
ပါတ်ဝန်းကျင်မှာ ကြွက်တွေ ရှိနေတဲ့ အခါစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ရပ်ပါတယ် ကြွက်ကို
တော်ရုံမဟုတ်ပဲ အုပ်လိုက် ရထားတွဲတတွဲစာဆို စဥ်းစားသာကြည့်တော့ ကြွက်တွေက ပါတ်ဝန်းကျင်ကို
အကျည်းတန်စေရုံသာမက ပလိပ်စတဲ့ ရောဂါပိုးတွေကိုပါ သယ်ဆောင်လာတတ်တဲ့ မကောင်းဆိုးဝါး
အသေးစားလေးတွေပါ အဲ့လိုမျိုးကြွက်တွေက လူတွေကိုပါ ကိုက်ဖြတ် စားသောက်နေတဲ့ အထိ အန္တရာယ်ရှိလာပြီဆိုရင်ရော …..
ဇာတ်လမ်းအကျဥ်း- တရုတ်ပြည်ရဲ့ ပေဝေပြည်နယ်ကနေ ရထားတစီး ထွက်ခွာစပြုနေပါတယ် ရထားပေါ်ကနေ
အခြားရထားပေါ်မှာလူသေတွေနဲ့ ကြွက်အုပ်လိုက်ကြီး ပြေးဆင်းသွားတာကို မြင်လိုက်ရသူကတော့ ကျန်းမာရေးဌာနက
ဆရာစူးပါ နောက်တော့ သူတို့ရထားပေါ်မှာပါ ကြွက်သံတွေ ဆူညံလာပြီးနောက် ဘာတွေ ဆက်ဖြစ်ကြမလဲ
လူတွေရဲ့ အသက်ဘေးနဲ့ ရင်ဆိုင်လာရတဲ့အခါ အတ္တနဲ့ယှဥ်ပြီး ဆုံးဖြတ်တတ်မှုတွေ အားလုံးကို ကြည့်ရှုရမှာပါ
အခုတစ်ခေါက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ January2ရက်နေ့မှပူပူနွေးနွေးထွက်ရှိထားတဲ့ TakingaShot at Love ရုပ်ရှင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်
ရေခဲပြင်ဟော်ကီကစားသမားဖြစ်တဲ့ ရိုင်ယန်ကုဖ့်ပါဟာ ရေခဲပြင်ဟော်ကီမှာတော့ နာမည်ကြီးတဲ့အကျော်အမော်ကစားသမားတစ်ဦးပါ
ရိုင်ယန်လိုအားကစားသမားတစ်ဦးအတွက် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတယ်ဆိုတာ တွေးတောင်မတွေးဝံ့တဲ့ အိပ်မက်ဆိုးတစ်ရပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်
ဒီလိုနဲ့ခြေချင်းဝတ်ဒဏ်ရာရတဲ့ရိုင်ယန်တစ်ယောက် သူရဲ့ညီဝမ်းကွဲဖြစ်တဲ့တယ်ရီနဲ့ဆက်စပ်မိပြီး အေဗွန်မြို့မှ ဘဲလေးဆရာမဂျန်နာထံမှာ ခြေချင်းဝတ်ဒဏ်ရာကုသရန် အကြောင်းဖန်လာပါတော့တယ်
ဂျန်နာဆိုသူမှာလည်း ရိုင်ယန်ကုဖ့်ပါလိုမျိုး ခြေချင်းဝတ်ဒဏ်ရာကြောင့် သူမရဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘဲလေးကချေသည်ဘဝကို လက်လွှတ်ခဲ့ရသူပါ
ဒါပေမယ့်သူမဟာ သူမတတ်ကျွမ်းတဲ့ဘဲလေးအကကိုသုံးပြီး ခြေချင်းဝတ်ဒဏ်ရာကို ပျောက်ကင်းအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်
ကုထုံးတွေအများကြီးရှိတဲ့အထဲမှာ ဘဲလေးအကကုထုံးကိုသုံးပြီး ကုသပေးတာဆိုတော့ အတော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်
ဒီလိုနဲ့ဂျန်နာတစ်ယောက် ဘဲလေးကုထုံးကိုသုံးပြီး ရိုင်ယန်ကိုဘယ်လိုတွေကုသပေးမလဲ…..
နှစ်ဦးကြားမှာလည်း ဘယ်လိုသံယောဇဥ်ကြိုးလေးတွေ ရစ်နှောင်သွားမလဲဆိုတာတွေကို စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုလိုက်ရအောင်ရှင်
ရိုင်ယန်အနေနဲ့ မင်းသား Luke Macfarlaneကပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပြီး မင်းသမီးချော Alexa Penavega က ဂျန်နာအဖြစ် ပါဝင်အားဖြည့်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်
ဒီ Locked Down ဆိုတဲ့ကားလေးက ကြည့်ရှူသူတွေကို ဇာတ်လမ်းခပ်အေးအေး Cast အလန်းစားတွေနဲ့ ဖြည်းဖြည်းချင်း
ရင်ထဲထည့်သွားစေမဲ့ကားလေး ဒီကားလေးကိုကြည့်ပြီးရင် Covid ကြောင့် ဖြစ်ရတဲ့အခြေအနေတချို့ကို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းအရတော့ တဖြည်းဖြည်းယိုယွင်းပျက်စီးလာတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးကြောင့် ခွာပြဲရတော့မဲ့ Linda နဲ့ Paxton ဟာ
Covid Lockdown ကြောင့် တစ်အိမ်တည်းမှာ ပိတ်မိနေကြတယ်။ ဘ၀ကိုအရိုင်းဆန်ဆန်ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ Paxton နဲ့ တော်ပြီးထက်
မြက်တဲ့ Linda တို့ အချိုးအကွေ့တစ်ခုမှာ ဆုံခဲ့ကြပေမဲ့ Paxton တစ်ယောက်ကတော့ တစ်ညမှာ သူလုပ်လိုက်တဲ့အမှားတစ်ခုကြောင့်
ဒီလိုတွေ သူဘ၀ဆက်တိုက် ကံဆိုး‌နေရတာလို့ ထင်နေတယ်။ Linda ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးလေးကလည်း အပြင်ပန်းကကြည့်ရင် အလုပ်
အကိုင်ကောင်း ၀င်ငွေကောင်းပေမဲ့ စိတ်ဖိစီးစရာ စိတ်ရှုပ်စရာတွေအပြည့်ရှိနေတာကို အတူနေတဲ့ သူ့ရည်းစား Paxton မပြောနဲ့ တစ်ဦး
တစ်လေတောင်မသိ၊ ဒီလိုနဲ့ ကံကြမ္မာကြောင့်ပဲလိုဆိုရမလား သူတို့ရဲ့ ချွတ်ချော်နေတဲ့လမ်းတွေကို ပြန်စုံစည်းပေးမဲ့ကိစ္စတစ်ခုပေါ်လာခဲ့
ပါတော့တယ်။ မထင်မှတ်ပဲ တကယ်ရင်ထဲရောက်စေတဲ့ကားလေးမို့ အများကြီးဆက်ညွှန်းနေရင် အရသာပေါ့သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်
ဒီကားထဲက Cast တွေကတော့ အားလုံးသိကြတဲ့ Anne Hathaway (Cat Woman) နဲ့ Chiwetel Ejiofor တို့က အဓိကပါဝင်သရုပ်
မိဘမစုံမလင်နဲ့ ကြီးပြင်းလာရတဲ့ ကလေးလေးတစ်ယောက်ရဲ့
အမေတစ်ခု သမီးတစ်ခု ဘဝနဲ့နေလာခဲ့ရတဲ့
ကိုယ်တိုင် အဖေရှာပုံတော်ဖွင့်ဖို့ ကြိုးစားပါတော့တယ်။
အဖေရှိရာမြို့ဆီ ခြေဆန့်လို့ ရှာဖွေရင်းကနေ
အဖေဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့သူဟာ တစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ဘဲ နှစ်ယောက်ဖြစ်နေတဲ့အခါ
အမေကရော ဘာဖြစ်လို့ အဖေရင်းအကြောင်းကို မပြောပြချင်ရတာလဲ?
တင်ဆက်ထားတဲ့ ပေါ်တူဂီဇာတ်ကားကောင်းလေးတစ်ကားဖြစ်တာမို့ ကြည့်ဖို့ ညွှန်းပါရစေ။
Netflix ရဲ့ ရုပ်ရှင်အသစ်လေး ခံစားကြည့်ရအောင်။
မင်းသား မင်းသမီးတွေက နာမည်ကြီးတွေလို့တော့ ပြောကြတယ်ဗျ။
ကျွန်တော်ကတော့ အကြည့်နည်းလို့ သိပ်မသိဘူး။
ဒါပေမယ့် ဇာတ်လမ်းအကြောင်းကိုပဲ ပြောရအောင်။
တရုတ်ဝန်ကြီးချုပ် ဝန်ကျားပေါင်နဲ့ တွေ့ခွင့်ရဖို့
သူ့ဘဝဇာတ်ကြောင်းကို အီးမေးလ် ပို့ရာကနေ စတာပေါ့ဗျာ။
အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ ဇာတ်နိမ့်တွေ ဇာတ်မြင့်တွေ အမျိုး ၁၀၀၀ လောက် ရှိခဲ့ပေမယ့်
တကယ်တော့ ဇာတ် ၂ မျိုးပဲ ရှိပါတယ်။
သခင် နဲ့ အစေခံပေါ့။
အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ လူတန်းစား ကွာခြားမှုအမြင်တွေ ရုန်းကန်မှုတွေ အကြောင်း
ဇာတ်လိုက်ရဲ့ ဥပမာကတော့ သူတို့လို အစေခံ လူတန်းစားတွေကို
ကြက်လှောင်အိမ်ထဲက ကြက်တွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြထားတယ်ဗျာ။
ကြက်လှောင်အိမ်ထဲက ကြက်တွေဟာ သူတို့ရှေ့မှာ ကြက်တွေကို သတ်နေတာတွေ မြင်ရတယ် သွေးနံ့တွေရတယ်။
ဒါပေမယ့် လှောင်အိမ်ထဲက ထွက်ဖို့ မကြိုးစားကြဘူး။
အစေခံတွေအားလုံးဟာလည်း ဒီလိုလူတွေပဲလို့ ဆိုထားတယ်။
ဒီဇာတ်လမ်းကတော့ ကြက်လှောင်အိမ်ထဲကနေ ထွက်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့တဲ့
IMDb Rating ကတော့ မထွက်လာသေးပါဘူး . အစောဆုံးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
အခုဒီကားလေးက ဒီနှစ်ထဲမှာပဲထွက်ရှိထားတဲ့ Action/ Drama/ Sport စတိုင် ဇာတ်ကားကောင်းလေးပါ။
ဘရာဇီးကိုယ်ခံပညာတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ ဂျူဂျစ်ဆုမှာထူးချွန်တဲ့ မစ်ကီကယ်လီ…….ဇွဲ၊ သတ္တိရှိပြီး အနိုင်မခံအရှုံ
မပေးတဲ့ ကယ်လီ ၊ ခင်ပွန်းသည်ကောင်းတစ်ယောက် ဖခင်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ကယ်လီ၊
ထိုးသတ်ပွဲတွေကို မကြိုက်တဲ့ သူ့ရဲ့ ချစ်တဲ့ဇနီးသည်ကိုဖြောင်းဖြပြီး တရားဝင်မဖြစ်သေးတဲ့ MMAပွဲကိုဝင်ပြိုင်
ခဲ့တဲ့ကယ်လီ……… သူ့ဘဝမှာမရခဲ့တဲ့အရာကို မိသားစုကိုပေးချင်ခဲ့တဲ့ကယ်လီ၊ သားဖြစ်သူကိုသိပ်ချစ်ပြီး သား
ဖြစ်သူကို သူ့လိုမဖြစ်စေချင်ခဲ့တဲ့ ကယ်လီဆိုတဲ့ MMAဖိုက်တာကြီးအကြောင်းကို ရသစုံနဲ့ခံစားကြည့်ရှုရင်း
မက္ကဆီကိုနဲ့ တက်စ်ဆက်ပြည်နယ်ကြားက နယ်စပ်မှာဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကို အခြေခံရိုက်ကူးထားတဲ့
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ ဘေလ်တို့မိသားစုက တက်စ်ဆက်ပြည်နယ်နဲ့ မက္ကဆီကိုနယ်စပ်မှာ မွေးမြူရေးခြံလုပ်ငန်
လုပ်ကြတဲ့ မိသားစုပါ။ သားအကြီးလူးကပ်စ်က မြင်းစီးတော်သလို သားအငယ်ဂျက်ဆင်ကလည်း ဘေ့စ်ဘောမှာ ပါရမီ
ပါတဲ့ကောလိပ်ကျောင်းသားတစ်ယောက်ပေါ့။ သူတို့ခြံက နယ်စပ်မှာရှိတာကြောင့် မက္ကဆီကိုဘက်က နိုင်ငံရေးခိုလှုံချင်တဲ့
သူတွေ တရားမဝင်ဖြတ်သွားတိုင်း သူတို့ခြံစည်းရိုးတွေကို ညှပ်သွားတတ်တာကြောင့် သူတို့ရဲ့ကျွဲတွေနွားတွေလွတ်ကုန်တာ
ဂျက်ဆင်တစ်ယောက် ကောလိပ်ပိတ်တဲ့ နွေရာသီမှာ အိမ်ကိုခဏပြန်ရောက်နေတုန်း ပျော်ရွှင်စရာ သူတို့မိသားစုလေးကို
ဂြိုလ်ဆိုးဝင်ပါတော့တယ်။ အဲဒါကတော့ နယ်စပ်က တရားမဝင်ဖြတ်သွားတဲ့ မက္ကဆီကန်အုပ်ထဲက ကောင်လေးတစ်ယောက်
ကို ဂျက်ဆင် မတော်တဆသတ်လိုက်မိတာပါပဲ။ ကံတရားက တကယ်ထူးဆန်းပါတယ်…ကိုယ်ပိုင်တဲ့မြေကို ကာကွယ်နေတဲ့
ဂျက်ဆင်က ကြမ္မာငင်ပြီး ပြေးရင်းလွှားရင်း မက္ကဆီကိုနိုင်ငံထဲ ရောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့ ဘာတွေဘယ်လိုဆက်ဖြစ်မလဲဆို
Action, Adventure, Thriller အမျိုးအစားမို့ ပရိတ်သတ်ကြီးလည်း ကြိုက်နှစ်သက်မို့လည်း ယူဆပါတယ်။
တစ်ခါတုန်းက ကြီးမြတ်တဲ့ဘယ်လိုနဲ့ ဖျက်ဆီးသူချာနိုတို့ဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီး
ချာနိုရဲ့ယာဉ်ဟာလကိုတိုက်မိပြီး အစိတ်စိတ်အမြွာမြွာ ပျက်စီးသွားပါတယ်။
အန်တွန်ဆိုတာ ကမ္ဘာမြေကဖြစ်ပြီးတော့ နေမကောင်းတဲ့သူ့အမေကို စောင့်ရှောက်နေတဲ့သူပါ။
မျက်လှည့်ဆရာ Maxတစ်ယောက်ဟာ နာမည်ကြီးစေမဲ့ လှည့်ကွက်သစ်လေးတွေကို မတီထွင်နိုင်တာကြောင့်
Magic Motorဆိုတဲ့ ကားအရောင်းဆိုင်မှာ အချိန်ပိုင်း မျက်လှည့်ပြစားနေရသူဖြစ်ပါတယ်။
သူ့ဘဝမှာ မျက်လှည့်လှည့်ကွက်ကြီးတစ်ခုကို လုပ်နိုင်ပြီး နာမည်ကြီးလာဖို့အတွက်ဘဲ စိတ်ဝင်စားနေသူပါ။
တစ်နေမှာ သူ့အကိုနဲ့မရီးဟာ လေယာဉ်ပျက်ကျထဲပါသွားကာ သေဆုံးသွားတဲ့အတွက် အသက်၁၀နှစ်အရွယ် သူ့ရဲ့
တူလေး Timmyတစ်ယောက်ဘဲကျန်ခဲ့ပါတယ်။Maxရဲ့ မိဘတွေကလဲ အသက်ကြီးနေပြီးတော့
အဖေကလဲ ကျန်းမာရေးမကောင်းတာကြောင့် တစ်ကိုယ်တည်းသမား Maxက Timရဲ့အုပ်ထိန်းသူဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
ဘဝမှာ တစ်ယောက်တည်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေခဲ့တဲ့ Maxနဲ့ ရုတ်တရတ် မိဘတွေကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရလို့ အားငယ်နေတဲ့
Timတစ်ယောက်က တစ်အိမ်ထဲအတူနေဖို့ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။Maxက သူ့တစ်ဘဝလုံး နာမည်ကြီးတဲ့ မျက်လှည့်ဆရာဖြစ်လာဖို့
ရည်မှန်းချက်ရှိတဲ့လူဖြစ်တာကြောင့် သူ့ဘဝထဲရောက်လာတဲ့ Timကိုဘယ်လို ပျိုးထောင်ရမလဲ နည်းလမ်းမသိဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။
၁၀နှစ်အရွယ် Timကလဲ မရင်းနှီးတဲ့ ဦးလေးဖြစ်သူနဲ့ အတူနေရမဲ့အတွက် ကလန်ကဆန်တွေလုပ်လာခဲ့ပါတယ်။
Maxတစ်ယောက် သူ့တူလေး Timနဲ့ ဘယ်လိုအဆင်ပြေအောင်ကြိုးစားမလဲနဲ့ သူ့အိမ်မက်ကိုရော